NgoJuni 2021-Funda ukuRhweba
Inyanga: Juni 2021
I-FTSE 100 (UKX) ikwi-Uptrend, ilwa neNkcaso kwiNqanaba 7200
Isalathiso se-UKX kukunyuka okuphezulu. Okwangoku, i-UKX ijongene nokwaliwa kwinqanaba le-7200. Nge-17 kaJuni, isalathiso sagxothwa njengoko imarike yehla ukuya kwinqanaba le-6990. Isalathiso siyachacha njengoko saphinda saqala ukuya phezulu. Okwangoku, nge-25 kaJuni uptrend, umzimba wekhandlela obuyileyo uvavanye inqanaba lokubuyisa le-50% yeFibonacci. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-UKX inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba 7317.42.
I-UKX inyuke yaya kwinqanaba lama-46 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba imakethi ikwindawo ephezulu kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zijonge phezulu zibonisa umkhwa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE inyukela phezulu. NgoJuni 23 uptrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-UKX izakuvuka iphinde ibuye umva kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-7160.80. Ukusuka kwintsebenzo yamaxabiso, intengiso ifikelele kwinqanaba eliphezulu le-7177.56.
I-FTSE 100 ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihamba phezulu. Ixabiso le-UKX lingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo ebonisa ukunyuka kwesalathiso.
I-FTSE 100 (UKX) inyuka emva kokophuka kwangoko. Isalathiso siqale kwakhona ukunyuka okuya kutyelelo oluphezulu lwangaphambili. Nangona kunjalo, imakethi inokuthi ijongane nokuxhathisa kwinqanaba le-7200. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-FTSE 100 iya kunyuka iye kwi-2.0 Fibonacci eyandisiweyo okanye kwinqanaba 7317.42.
Idola inyuka kwiDatha ye-ADP yeDatha, amaPawundi abuyayo njenge-BoE Haldane iyathetha
Emva kwamanani oqoqosho olungcono kunokuba bekulindelwe, idola kunye ne-loonie bavuka kwiseshoni yase-US yokuqala. Ukulandela izimvo ze-Hawkish zeBhanki yaseNgilani eziphambili, ukubekwa kweliso elibukhali kujongwe kakhulu. Namhlanje, i-Swiss Franc yeyona mali iqhuba kakubi, ilandelwa yiNew Zealand kunye neDola zase-Australia. Idola liphumelele kuvavanyo lokuqala lwedatha, kwaye ingqwalaselo ngoku iya kutshintshela kwisalathiso semveliso ye-ISM ngomso kunye neeroli ezingezizo ezasefama ngoLwesihlanu.
NgoJuni, ingqesho ye-ADP e-US inyuke ngama-692 amawaka, ephezulu kunalindelweyo ngabantu abangama-600 amawaka. Ngobungakanani benkampani, ishishini elincinci longeze i-215 lamawaka emisebenzi, ishishini eliphakathi- i-236 lamawaka, ishishini elikhulu-i-240 lamawaka. Ngokwecandelo, inani lemisebenzi kwimveliso yempahla inyuke ngama-68 amawaka, kwicandelo lenkonzo- ngama-624 amawaka.
"Ukubuyiswa kweemarike zezabasebenzi kuhlala kuhleli kwaye uJuni uphele ikota yesibini eqinileyo yokukhula kwemisebenzi," Utshilo uNela Richardson, uqoqosho oluphambili kwiADP. “Nangona inani lemisebenzi lisephantse ukuba li-7 lezigidi lingaphantsi kwenqanaba elalikho ngaphambi kwe-COVID-19, ukusukela ekuqaleni kuka-2021, ukwanda kwemisebenzi bekuphantse kube zizigidi ezi-3. Ababoneleli beenkonzo, elona candelo libethe kabuhlungu, bayaqhubeka nokwenza umsebenzi onzima ngokuthumela ezona nzuzo zingamandla kuzonwabisa nakububele. Eyona nzuzo inkulu njengeefektri kwilizwe liphela iqala ukuvula ngokupheleleyo. ”
Ingcali yezoqoqosho eyintloko yeBhanki yaseNgilandi u-Andy Haldane kwintetho yakhe ukuba ukuphela kwalo nyaka ukunyuka kwamaxabiso e-UK kuya kuba "Malunga neepesenti ezi-4, hayi iipesenti ezi-3." "Oku kwandisa amathuba okuba ingxelo ephezulu yokunyuka kwamaxabiso iya kuba yeyona nto iphambili, kulindelo oluphambili kunokuba ngumngcipheko." Ukulindela ukunyuka kwamaxabiso kuya kuthi emva koko "Tshintsha phezulu".
IDola iseka irekhodi elitsha liphezulu
Ukulandela isimangaliso se-Federal Reserve sokumangaliswa kwe-hawkish ngoJuni 16, the Isalathiso sedola yaseMelika inyukele kwelona nqanaba liphezulu ukusukela oko yaphakama ukusuka kwi-90.441.
I-DXY ifikelele kwinqanaba eliphezulu lama-92.448, elona nqanaba liphezulu ukusukela ngo-Epreli 8 walo nyaka. NgoLwesithathu, indibaniselwano yedatha eqinileyo yase-US, ukuhamba kwe-delta covid, izithethi ze-hawkish zeFed, kunye nokulindelwa kwengxelo esempilweni ye-Nonfarm Payrolls ngolwe-Sihlanu incede idola ukugcina ingxelo elomeleleyo kwiimarike zezemali.
URobert Kaplan weFed waphinda wachaza indlela awayecinga ngayo, esithi, “Ndingathanda ukuthabatha kwangoko kunokuphela konyaka.” Oku, kudityaniswe nenyaniso yokuba iiPayroll zabucala zenyuka ngokuthe ngcembe ngoJuni, zibeke idola yaseMelika kwikhosi yayo yeyona nyanga ibalaseleyo kwiminyaka emine enesiqingatha.
I-USD / i-CAD ibuyisa kwakhona uMmandla oThengiweyo kwinqanaba le-1.2500, ngoMeyi bajongane nokuchaswa
Amanqanaba enkxaso aphambili1.1900, 1.1800, 1.1700
USD / CAD uqalise kwakhona ukunyuka okuphezulu emva kokufikelela kumgangatho ophantsi we-1.2300. Okwangoku, isibini semali siyarhweba kwingingqi ethengwe ngaphezulu kweemarike. Esi sibini siyarhweba kwinqanaba le-1.2406 ngexesha lokubhalwa. Okwangoku, nge-23 kaJuni yedowntrend, umzimba wekhandlela othathwe kwakhona wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci ngama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le-1.1877.
I-USD / i-CAD inyuke yaya kwinqanaba lama-64 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba isibini sikummandla ophakamileyo kwaye ngaphezulu komgangatho ophakathi 50. Esi sibini sikwasondela nakummandla othengiswayo othengisayo. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-USD / i-CAD ithengisa kwindawo ethe kratya yentengiso. Abathengisi kunokwenzeka ukuba bavele kummandla ogqithileyo ukuze batyhale amaxabiso ezantsi. Imivalo yamaxabiso ingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo. Ikhefu elingaphantsi kwemilinganiselo ehambayo iya kubonisa ukuqala kwakhona kokuthengisa uxinzelelo.
I-USD / CAD-4 Itshathi yeYure
I-USD / i-CAD ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho wokuqhubela phambili. Nangona kunjalo, imarike ifikelele kummandla othengwe ngaphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi zibonisa ukwehla.
I-USD / i-CAD ibini ngoku isezantsi. Esi sibini sithengisa ngoku kwingingqi ethengiweyo. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka kwakhona ukuba isibini sijongana nokwaliwa kwindawo yokumelana ne-1.2500.
Phawula: Limali2.TrU-ade akanguye umcebisi ngezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali
I-Ripple inyula i-Mastercard yeSigqeba esiLawulayo sokuSebenza kweYurophu
Kwimizamo yayo eqhubekayo yokukhula kwintengiso ephambili, I-Ripple (XRP) ubhengeze ukuqeshwa kukaSendi Young njengomlawuli olawulayo kwimisebenzi yayo yaseYurophu.
I-Sendi izisa ngaphezulu kweminyaka eli-15 yamava kwicandelo le-fintech kunye nesisombululo seentlawulo kwihlabathi liphela "Jonga isicwangciso-qhinga kunye nokuxhasa ukwandiswa kwetekhnoloji ye-Ripple yothungelwano lwezezimali kwihlabathi, iRippleNet."
Kwisithuba esandula kutshanje, uYoung wayesebenza eMastercard, apho wachitha khona isiqingatha seminyaka elishumi "Icebo, ukuthengisa, ukusebenzisana kwebhanki-fintech kunye nophuhliso lweshishini."
Ukuthetha ngokuqeshwa ngobuchule, umphathi jikelele weRippleNet Asheesh Birla uqaphele ukuba:
Ukuchongwa kukaSendi kubonisa ithuba elikhulu kwimisebenzi yethu yaseYurophu enikwa amava obunkokheli, ukuqonda okunzulu ngentlawulo yomhlaba, kunye nolwazi lokukhulisa kunye nokukhulisa ishishini lenethiwekhi. ”
Ukugxila ekuzimiseleni kweRipple kwimakethi yaseYurophu kungenxa yobukhulu belizwekazi njengethuba lemarike lomboneleli we-cryptocurrency. NgokukaRipple, inani labantu baseYurophu limele malunga neepesenti ezingama-25 zabo bonke abathengi babo. Kwiphepha lokushicilela, inkampani esekwe eSan Francisco iqaphele ukuba:
"Unyaka ukuza kuthi ga ngoku, ukuthengiselana nge-European On-Demand Liquidity (ODL) kukhule nge-250% xa kuthelekiswa ne-2020, eyenza ngaphezulu kwe-40% yayo yonke imisebenzi ye-ODL unyaka ukuza kuthi ga ngoku."
Oko kwathiwa, i-Ripple ibonakala igcine indlela esempilweni yokwamkelwa kwe-XRP, ngenxa yokusebenzisana kwayo namaziko emali kwihlabathi liphela.
Amanqanaba aphambili e-Ripple ukuba abukele-nge-30 kaJuni
Ukulandela ukubuyiswa okunempilo ngaphezulu kweeyure ezingama-48 ezidlulileyo ukusuka kwinqanaba le-0.6000 leedola, i-XRP ibonakala ngathi iphakathi kolungiso olumnene. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu iwele kwindawo eyi-0.6800 yeedola ukusuka kwi- $ 0.7338 ephezulu ebhalwe izolo.
Oko kwathethileyo, kubonakala ngathi ukulungiswa kunokuba kuphele kwakamsinya nje xa iRipple iphinda ibuya ngamandla. Imbuyekezo ngaphezulu kwe- $ 0.7000 yokumelana nengqondo kufuneka iqinisekise ukuphela kokulungiswa kwe-bearish.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.7000, i- $ 0.7500, kunye ne- $ 0.7800, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.6500, $ 0.6000, kunye ne- $ 0.5200.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.41 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 30.9 billion
Ukulawula kweRipple: 2.18%
tags Cryptocurrency, iindaba, Ripples, XRP
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): U-Ether uqala kwakhona kwi-Uptrend kodwa ngoMeyi bajongane nokwaliwa kwi-2,400 yeedola
I-Ethereum ibuyela ngaphezulu kwinqanaba eliphantsi elidlulileyo kwinqanaba le-1,717 leedola
I-altcoin inokwenzeka ukuba iphinde iqhubeke nokuya phezulu
Ixabiso langoku: $ 2,123.30
Ukunyusa imali kwiimarike $ 247,927,183,514
Umthamo wokuThengisa: $ 23,064,862,946
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 2,800, $ 3,000, $ 3,200
Imimandla emikhulu yemfuno: $ 2400 ,, $ 2,200, $ 2,000
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoJuni 30, 2021
Ukusukela nge-26 kaJuni, Ethereum Ebesenza izinto ezintle zihamba ngaphezulu. Eyona altcoin inkulu ihlawulwe ngaphezulu kwe- $ 1,710 yenkxaso yokuqhubeka kwakhona. Iinkunzi zeenkomo zatyhala i-altcoin yaya kuthi ga kwi-2,220 yeedola kodwa bayaliwa. Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Juni, u-Ether wagxothwa kweli nqanaba lokumelana nanjengoko imakethi yehlile isezantsi kwi-21 yeedola. Iinkunzi zathenga idiphu njengoko imarike iqala phezulu. Kwicala elingaphezulu, ikhefu elingaphezulu kwe- $ 1,717 yokuchasana iya kwenza ukuba ingqekembe iye kwi-2,200 yeedola.
I-altcoin ikwinqanaba lama-46 le-Index ye-Relative Strength period ye-14.I-altcoin ikwi-downtrend zone kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwe-80% ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba i-Ether ikwi-bearish umfutho. Okwangoku i-altcoin inokuthi ifumane inkxaso ngaphezulu kwenqanaba lama- $ 2080.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Ethereum iphinde yaqala ngokunyuka kwayo. I-uptrend yangoku ijongene nokuchasana kwinqanaba le- $ 2,200. I-uptrend iya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso ayaphula uxhathiso lwangoku.
Okwangoku, nge-29 kaJuni uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanywe i-78.6% yeFibonacci kwinqanaba lokubuyisela. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-Ethereum iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci kunye nokubuyela umva. Oko kukuthi, u-Ether uza kuguqula kwinqanaba lama-2,360. 43.
I-GBP / i-USD ephindwe kabini kwiPateni!
I-GBP / i-USD ifumene inkxaso eyomeleleyo kwixesha elifutshane kwaye ngoku ijongeka ngathi ithengisa ngaphezulu. Iphawundi iyasebenza ngoku nokuba idatha yase-UK ingenile ngaphambili. I-Akhawunti yangoku ichazwe kwi -12.8B ephezulu xa ithelekiswa -13.9B kulindeleke kwaye ithelekiswa -26.3B kwixesha lokwenza ingxelo elidlulileyo.
I-GDP yokugqibela yehle nge-1.6% ngaphezulu xa ithelekiswa ne-1.5% kulindeleke, ngelixa uHlahlo-mali oluHlaziyiweyo lweShishini lwehle nge-10.7% kuthelekiswa ne-11.9% yoqikelelo. Inguqu ye-US ADP engeyiyo yeFama yeNgqesho, iChicago PMI, kunye nokuThengiswa kweKhaya okuLindeleyo kungashukumisa isibini kwaye kungazisa intshukumo eyomeleleyo.
Uhlalutyo lobuchwephesha lwe-GBP / USD H1!
I-GBP / i-USD ifumene inkxaso kwimigca esezantsi ye-pitchfork (lml). Ngoku ibekwe ngaphezulu kwenqanaba lemihla ngemihla (1.3842) yenqanaba.
Ukwenza ukuphakama okuphezulu okuphezulu, ukuvala ngaphezulu kwe-1.3860 kunokuvula iphethini enokubakho kwiZantsi ephindwe kabini kwaye kunokuzisa ukubuyela okuqinileyo.
I-GBP / i-USD ifumene inkxaso eyomeleleyo kwaye ngoku inokujika iye phezulu. Indawo ephezulu ephezulu inokubonisa ukukhula okunokubakho kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili.
tags GBPUSD, Uhlalutyo Technical, ukuseta urhwebo
I-US Wall Street 30 (US30USD) idityaniswa ngezantsi kweNqanaba 35000, Uptrend kunokwenzeka
Iindawo eziKhuselekileyo: 34000, 34500, 35000
Isitalato iUS Wall 30 kuluhlu oluboshwe kwinqanaba elingaphantsi kwenqanaba lama-35000. Ukusukela ngoMeyi 7, isalathiso besithengisa ngaphantsi kwayo. Isalathiso sabuyisa indawo yokuchasana kabini kwaye sagxothwa. Abathengi basazama indawo yokuchasana nokophula ngaphezulu kwayo. Ngomhla we-14 kuMeyi phezulu; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba intengiso iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba lama-35631.10.
I-Wall Street 30 yase-US inyukele kwinqanaba lama-52 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba isalathiso sikwindawo ephezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye nama-50-iintsuku zee-SMAs zihamba ngokunyuka zibonisa inkqubela phambili.
I-US Wall Street 30 (US30USD) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukulinganisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sitshintsha ngoku ngezantsi kwendawo yokuchasana. Ukusukela nge-21 kaJuni isalathiso siphinde safumana kulwaphulo lwamva nje. Ukuya phezulu kujongene nokwaliwa ukusuka phezulu kutshanje. Isalathiso sidibanisa ngezantsi koxinzelelo kwinqanaba lama-34600.
I-US30USD ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
I-US30USD ikwi-uptrend. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokuchasana kwinqanaba lama-35000. Imarike okwangoku inyuka ingaphantsi kwenqanaba lokumelana. Ngokwesixhobo seFibonacci, isalathiso sinokunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba lama-35631.10.